Kolonyo ay la socdeen Ciidamo ka tirsan AMISOM oo la weeraray | Banaadir Times
HomeWararKolonyo ay la socdeen Ciidamo ka tirsan AMISOM oo la weeraray
Kolonyo ay la socdeen Ciidamo ka tirsan AMISOM oo la weeraray
Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen Kolonyo Gaadiid ah oo ay wateen Ciidamada Uganda oo ka tirsan AMISOM, xilli ay ku socdaalayeen degaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Kolonyada Ciidamada AMISOM ayaa xilli la weerarayay waxaa ay marayeen wadada u dhaxeysa degaanka lambar 60 iyo Magaalada Marka oo ah XaruntaGobolka Shabeellaha Hoose.
Qof kamid ah dadka degaanka uu weerarka ka dhacay ayaa sheegay in dagaal culus uu dhex-maray Ciidamada Burundi ee ka tirsan AMIOSM iyo Al-Shabaab, kaas oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
“ Anaga oo iska jogna ayaan maqalnay jug culus iyo rasaas gaadiidka ciidamada AMISOM ayaa agteena marayay, dagaal ayaa ka dhacay goobta, waxaana aragnay khasaaro soo gaaray gaadiidka qaar ee Ciidamada AMISOM ayuu yiri” qof kamid ah dadka degaanka.
Weli wax faah faahin ah weerarkaas kama bixin saraakiisha Ciidamada Uganda ee ka tirsan howlgalka AMISOM, waxaana weerarkaas uu kamid yahay weerarada had iyo jeer ka dhacay degaannada Gobolka Shabeellaha Hoose.
Previous articleBajaajleey xirtay waddo muhiim ah oo ku taal Muqdisho
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble oo Isbitaalka ku booqday dhaawacyada qaraxii shalay